Cram : “Tsy nandray andraikitra ny mpitondra” | NewsMada
Cram : “Tsy nandray andraikitra ny mpitondra”
“Inona no mba andraikitra sy fanentanana noraisan’ny fitondram-panjakana tao anatin’izay roa taona izay mba hisorohana ny pesta misy isan-taona sa ny fanitsiana ny lalàmpanorenana no vahaolana mba hitan’ny fitondram-panjakana amin’izany?”
Izay ny fanambaran’ny Cercle de réflexion pour l’avenir de Madagascar (Cram), omaly. Lasa seho ivelany fotsiny sisa no mitranga, rehefa mby an-koditra ny pesta. Nefa ny vahiny iray tamin’ny fandaharana tao amin’ny televizona tsy miankina iray, nilaza fa 75 no isan’ny olona matin’ny pesta, taona 2015.
Nitombo ny filaharanan’ny olona marary teny Befelatanana
Nanaitra izay nahita, ohatra, ny zava-nisy tetsy amin’ny hopitaly Befelatanana, ny 7 oktobra lasa teo 2017. Vao maraina tamin’ny 7 ora mahery, efa nilahatra ireo olona hanao fitiliana. Nisy ireo efa avy any amin’ny HJRA, Ampefiloha, fa tsy misy manao fitiliana pesta ao, araka ny voalazan’ny tomponandraikitra.
Tsy manao sarom-bava ny ankamaroan’ireo nilahatra, nefa misy milaza fa mandrehoka misy ra. Tamin’ny 8 ora mahery, tsy mbola nisy fandraisana ireo marary. Nilaza ireo mpanampy mpitsabo fa tsy misy fitiliana, fa miandry ny fanaovana izany avy any amin’ny Institut Pasteur. Nitombo ny filaharan’ny olona marary.
Mitaky fiovana toe-tsaina ny fiatrehana ny pesta
Maro ireo olona manao fitiliana ao amin’ny hopitaly Befelatanana. Toerana mety ifamezivezin’ny pesta amin’ny havokavoka i Mahamasina sy ny manodidina. Tsy manao sarom-bava ireo olona sasany atao fitiliana. Nefa voatery misakafo eo an-tsena, manodidina ny hopitaly. Tokony hisy fepetra horaisina amin’izany: fandrarahana fanafody ny tsena eo Mahamasina sy ny manodidina.
Manantena andro iray hatokan’ny fitondram-panjakana hanaovana fisaonam-pirenena sy fankaherezana hataon’ny filoha Rajaonarimampianina ho an’ny fianakavian’ireo matin’ny pesta ny Cram. Tena mitaky fiovan’ny toe-tsaina, ny rafitra, ny fandrasaina andraikitra sy ny fiaraha-mientan’ny olom-pirenena ny fanarenana an’i Madagasikara.